Loft Las Montañetas - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguElvira
Indawo, ukukhanya kunye nentuthuzelo zizinto ezintathu eziphambili ezichaza ukuba yintoni eyona ndawo iphakamileyo, uhlobo lwale mihla lwekhaya.
Iloft ecocekileyo kakhulu kwaye ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo. Indawo ifanelekile ukutyelela isiqithi njengoko ikuvumela ukuba uhambe kuyo nayiphi na indawo ukusuka kwindawo ephakathi. Kwakhona indawo ezolileyo kakhulu kwaye ikufuphi kakhulu neendawo zokuthenga.
Le ndawo iphezulu ibekwe kumbindi wesiqithi kwaye ithatha malunga nemizuzu engama-30 ukuya emantla eLanzarote nasemazantsi. Kuthatha malunga nemizuzu eyi-10 ukuya e-Arrecife, kunye nonxweme lwaseFamara, malunga ne-20. Kufuphi, malunga nemizuzu eyi-8, kukho iivenkile ezinkulu apho unokuthenga yonke into oyifunayo.
I-loft yindawo evulekileyo, kunye nekhitshi kunye negumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kwindawo enye. Igumbi lokuhlambela elineshawa lahlukene. Ukuba uthanda ukutya ngaphandle, unethafa elineembono eziqhelekileyo zeLanzarote.
Umhombiso ukhathalelwe kakuhle kwaye udala umoya onomtsalane kakhulu.
4.76 · Izimvo eziyi-167
Iloft yi-6 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseLanzarote,
Umbuki zindwendwe ngu- Elvira
Siyakufikeleleka kulo naluphi na uncedo onokulufuna, kwaye kuya kuba luvuyo ukucebisa iindawo kunye neemfihlo ezincinci zesiqithi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Güime